हामीसँग पैसाको बुटो छैनः भट्टराई | eAdarsha.com
हामीसँग पैसाको बुटो छैनः भट्टराई
पोखरा, २० फागुन। नयाँ शक्ति निर्माण अभियान संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कसैसँग पनि जबरजस्ती चन्दा असुल नगर्ने बताएका छन्।
चन्दाबाट जनता आजित भएको भन्दै आफ्नो पार्टीले स्वेच्छिक रुपमा मात्रै सहयोग जुटाउने प्रतिबद्धता जनाए। नयाँ शक्ति निर्माण प्रचार अभियान कास्कीले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले पैसाबिना पार्टीचलाउन नसक्ने भन्दै उनले नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्नका लागि पनि चन्दा आवश्यक भएको बताएका हुन्। ‘चन्दा बिना कुनै पार्टीपनि सञ्चालन हुन सक्दैन’-उनी भन्छन्-‘पैसा आकाशबाट झर्दैन, हामीसँग पैसाको बुटो छैन, जनता नै पैसाका बुटा हुन्।’ डा. भट्टराईले पार्टीसञ्चालनको लागि एकै व्यक्तिबाट कमिसनको रुपमा करोडौं रुपैयाँ नलिने स्पष्ट पारे।
भट्टराईले देशभर एक लाख सदस्य बनाएर केही महिनाभित्रै पार्टीघोषणा गर्ने जानकारी दिए। उनले नयाँ शक्ति पूरानै पार्टीका थपिने पार्टीनभएको भन्दै बैकल्पीक राजनीतिक अभियान भएको बताए। साथै, प्रत्येक जिल्लामा नयाँ शक्ति हेल्प डेस्क स्थापना गरी भ्रष्टाचारविरूद्ध लाग्ने बताए। सदाचार र सुशासन कायम गर्न आफ्नो अभियान केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। आरजु विष्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन अमृत सुवेदीले गरेका थिए।